Home विचार / दृष्टिकोण कुण्ठित मनका चीत्कारहरुको चुरो
कवि चन्द्र मादेन “आन्छन्”
"बिमोचन कार्यक्रममा मान्छेहरुको भीड देखेर शुरुमा त म तर्सेँ पो त ! सह्रै भव्य कार्यक्रम गर्नु भो नि" - नन्द चङ्सु, नेपाली आर्टस एण्ड कल्चर अध्यक्ष ।
"होइन त्यत्रो मान्छे तपाइले बोलाउँनु भएको कि तेह्रथुम मञ्चले ?" - भुपेन्द्र चेम्जोङ्ग- आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ अध्यक्ष ।
"काका साह्रै भब्य कार्यक्रम भयो , काकाले पनि देखाइदिनु भो नि"- नाम्लिङ्गेनी, खाना पानी ब्याबसाय सञ्चालिका ।
"भेना कार्यक्रम साह्रै राम्रो पो भयो त , मेरो बूबाले पनि खुबै प्रसंसा गर्नु भो ।" - सुश्री सबिना राई । -हेबेन्ली पाथ सदस्य ।
"भाइ पनि यत्रो ठूलो कवि हुँनुहुँदोरहेछ । आजको मान्छे, छोटो मीठो कार्यक्रम देखेर म त छक्कै परेँ ।"- रुपवती राई, हेभेन्ली पाथ सदस्य ।
"दाइ कार्यक्रम चाहिँ सोलिड र भव्य भयो ।"- सन्तोष बिश्वास तामाङ्ग, पत्रकार- नेप्स टाइम डटकम र बरधोज ओख्राबो- कि.रा.या.चु. नवनिर्बाचित सचिव ।
"साहित्यको कार्यक्रम भएता पनि उपस्थिति साह्रै राम्रो भयो ।" - बिनय शाह, नेप्स टाइम डटकम र इथ्निक भोइस ।
"पहिलापहिलादेखि मलाई राम्ररी थाहा छ यसपाली चाहिँ कविताको कार्यक्रम मान्छेको भीड साह्रै राम्रो ।"- प्रदीप थापा, नेपाली महासंघ अध्यक्ष ।
यी माथिका प्रतिकृयाहरु गत १५ जुलाई २०१२ का दिन हेनेरी जी ल्युङ्ग कम्यूनिटी सेन्टरमा मेरो कविता कृति "कुण्ठित मनका चीत्कारहरु"को बिमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुँनुभएका महानुभावहरुका हुँन । हुँन त अरुका पनि धेरै प्रतिकृयाहरु थिए सबैको राख्न असम्भव भएकाले गर्दा, यौटै कुरोलाईकिन धेरै बनाउँने भन्ने धेयले यो लखिन्दैछ।
प्रमुखअतिथि महाबाणिज्य दूत बिनोद कुमार उपाध्याय र बिशेष अतिथि वरिष्ठ संगितकार दिनेश सुब्बाकोहातबाट बिमोचित पुस्तक बिमोचन कार्यक्रम हल भित्रै ११९ प्रति बिक्रि भएको थियो । सभाहलमानअटाएर कोही उभिएर कोही ढोकाबाहिरबाटै उभिएर सुनेका थिए । यहाँ कुनै अपरिचित ब्यक्तिहरु थिएनन् । तमाम मेरा इष्टमित्रहरुले मलाई ऋणि बनाइदिनु भएको छ । यहाँहरु सम्पूर्ण प्रतिमूरिमूरी धन्यबाद दिन चाहन्छु ।
यतिहुँदाहुँदैपनि सुद्दिमा घुन लागेको मानसपटलमा इर्श्याले डेरा जमाएकाहरुको कुतर्क पनिमैले छड्के दृष्टि पाएको छु यसरी …। “आज धेरैको कार्यक्रम जुधेर पनि अरु मान्छे पनियसैमा थुप्रेर त्यत्रो धेरै भेला भए” भन्ने । त्यही कम्युनिटी सेन्टरमा इक्वेल अपर्चुनिटीमाइग्रेसको कार्यक्रम सकियो ०३:०० बजे । हाम्रो बिमोचनको कार्यक्रम शुरु भयो ठीक ०५:१५बजे । तपाइ ऐँझेरु मित्रलाई प्रश्न सोध्नै मन लागेर यो लेख देखाउँन पनि म बाध्य भएकोछु । मेरो प्रश्न ०३:०० को कार्यक्रम सकेर सहित्यक कार्यक्रममा पनि बसिदिउँ न त भनेरकुन चाहिँ मान्छे यो मूनिको नाम भएको बसेका थिए ? कि तपाइ अर्को पनि कार्यक्रममा आउँनुभएको थियो ? कार्यक्रम जुध्दा त झन मान्छे थोरै पो हुनुपर्ने होइन र ? हो चितवन समाज,धरान मञ्चको अधिवेशन, इक्वेल अपरच्युनिटी, च्याम्बर अफ कमर्स र मेरो पुस्तक लोकार्पणकार्यक्रमगरि धेरैको जुधेको तपाइको कुरोमा सहमत हुन्छु । यसरी जुधेकोले गर्दा १-३ जनापत्रकार ज्यूहरु वरपर, तल माथि, गर्नु भयो होला । स्वभाविक रुपले त्यो वहाँहरुको कामपनि हो । होइन भने यस्तो इर्श्या बोकी झुट्को खेती गरेर अरुलाई भ्रममा परेर चल्दैनमित्र जी ! सुन्नुहुन्छ भने त्यो तपाइको इर्श्याको कुण्ठा फ्याकिदिनुहोस ।
"कविदेश सुब्बाले त यत्रो माहोल त्यसमा पनि ११९ प्रति पुस्तक बिक्री भएको त यो पहिलो रेकर्डहङ्गकङ्गको ।" उता बिनय शाहले थप्नु भो- जो सुकैको कार्यक्रम भनेर कहाँ गइन्छर ! मान्छेहेरेर गइन्छ नि । वास्तबमा माथि भुपेन्द्र चेम्जोङ्ग जी ले सोध्नु भए कुरो उत्तर चाहिँतेह्रथुम मञ्चलेमा तेह्र थुमका साथीहरुले कसैलाई पनि बोलाउँनु भएको थिएन ।
सबै तपाइहरु मलाई माया गरेर आउँनु भयो, कार्यक्रमको सोभा बढाइदिनु भयो । मैले पनि खासै के नै ख्याँसे होला र ! केवल फोन गरेँ । बरु तेह्र थुमका २-४ जना साथीभाइ आउँनु खोज्दा निवर्तमान अध्यक्ष त्रिभुवन लुङ्फुङ्वाले ज्यादै भीडभयो कृपया तपाइहरु नाउँनुस भन्नु भयो । वास्तबमा त्यहाँ साच्चै भीड पनि थियो र वहाँलेभन्नु भयो ।
इर्श्याको पोकोहरु मध्य साहित्यकारको हातबाट बिमोचन गरेर "गैर साहित्यकारको हातबाट पहिलो" भन्ने । मित्र जी ! केही हतसम्म यहाँको कुरो सान्दर्भिक छ । महाबाँणिज्य दूत भनेको हामी नेपालीहरुको मात्र नभएर हङ्गकङ्गमा सबै निम्ति प्रमूख कुटनितिज्ञ महामहीम हुँन । त्यसो त करिब तीन महिना अघि चर्चित गायक राजेश पाएलको चार वटा गिती एल्बम बिमोचन किन गैर संगितकार एवं पूर्व प्र. मन्त्रीहरु लोकेन्द्र ब. चन्द र माधम नेपालबाट गराए त ? यस्ता उदाहरण हजारौँ छन् । ब्यक्ति भनेको बरिष्ट संगितकार दिनेश सुब्बाको सवालमा यो आलोचना गर्नुहुँनेलाई कतिको थाहा छ ? दिनेश सुब्बा ज्यूले हङ्गकङ्गमा करिब तीन वटा साहित्य कार्यक्रममा आफैँले लेख्नु भएको बिम्ब भएको कविता वाचन गर्नु भएको थियो भने भर्खरै निस्किएको गीति एल्बम "आमाकी नानी" भन्नेको एल्बमको सात ओटा गीत जम्मै वहाँद्वारा रचित गीतहरु हुँन ।
अर्को बिबादित आलोचना तेह्र थुम मञ्चले किन प्रकाशन गर्यो ? प्रतिउत्तर- यहाँ पनि एकहदसम्म आक्षेप सानन्दर्भिकै छ । त्यसैले यो बिषयमा तेह्रथुम मञ्चसँग कुरा हुँनु भन्दा अगाडि करिब तीनजना ताप्लेजुङ्ग समाजका सदस्यहरुसँग आग्रह यचना हुँदा पनि गर्जो टर्ने छाँट नभएर हो । फेरि हङ्गकङ्गमा सबैलाई सर्बबिदितै छ । आज ताप्लेजुङ्ग समाज कतिको सक्रिए भएर हिँडेको छ भन्ने । तथापी ताप्लेजुङ्ग समाज हाम्रो हो । यसको जगेर्ना सबैले गर्नुपर्छ । सम्बन्ध मेरो गाडा छ । त्यसैले होला करिब डेडबर्ष अगाडि ताससेले मलाई सयौँको अगाडि राखेर अभिनन्दन गरेको कुरो सबैमा सर्बबिदितै छ ।
दुईमा यो मेरो नितान्त ब्यक्तिगत कुरो हो । कसलाई गराउँनुपर्छ या पर्दैन थियो भन्ने सोतन्त्रताको कुरो हो । मित्र जी ! सक्नुहुन्छ भने म जस्तो तपाइ पनि सिर्जना गर्नुहोस । कसैद्वारा प्रकाशन गराउँनुस मेरो शुभकामना छ । अर्को घिनलाग्दो आक्षेप "भएभरको मान्छे भेला गरायो भन्ने । बिमोचन हलमा जति उपस्थित हुँनुहुन्थ्यो त्यहाँ मसँग धेरै नजिकका शुभ चिन्तक मात्र हुँनुहुँन्थ्यो । साँच्चै मैले चिनाजाना भएको सबै बोलाउँथेँ भने त्यसको तेबर बोलाइदिने थिएँ । किन कि हङ्गकङ्गमा बसेर मैले कमाएको केवल इष्टमित्र मात्र हो । सक्नुहुन्छ भने तपाइ पनि कार्यक्रम त्यसरी गर्नु होस र मान्छे थुपार्नुहोस ।
जो सुकैमा पनि त्यो मेरो खुशी साट्न आउँनुहुँने र काम बिशेषले आउँन नसक्नुभएका मेरा चीरपरिचित तपाइ अभिन्न स्वजनहरुमा आभार तथा कृतज्ञता ब्याक्त गर्दछु । आगामीदिनमा पनि यहाँहरुसँग बाँचुन्जेल यसरी नै निरन्तर दु:ख सुख साटासाट गर्ने छु । आखिरतपाइहरुको दु:ख मेरै दु:ख अनि तपाइहरुको सुख पनि मेरै सुख हो नि ।